Iyi ndiyo Nomad Base Chiteshi Apple Tarisa ine 18W kumashure USB C | Ndinobva mac
Iyi ndiyo Nomad Base Chiteshi Apple Tarisa ine 18W kumashure USB C
Uye kune akati wandei maNomad ekuchaja mabheseti pamusika uye ichangoburwa yakatangwa neCalifornia-based kambani, inopa vashandisi imwezve mari yekutenda nekubatanidzwa kwezviteshi zviviri kuseri kwechigadziko, chiteshi USB C 18W uye imwe 7,5W USB A.
Nezvinhu izvi zvitsva uye nesarudzo yekukwanisa kubhadharisa inosvika maviri ma iPhone panguva imwe chete kana iPhone uye mamwe maAirPod pamwe neApple Watch, tinogona kutaura kuti iyo Nomad base inokwira zvigaro semunhu anogona kukwikwidza kutenga nevashandisi veApple.
1 Chii chiri mubhokisi reiyi Apple Watch Base Chiteshi
2 Nomad Yekuchaja Base Dhizaini
3 Kushanda kwezuva nezuva
4 Base mutengo
Chii chiri mubhokisi reiyi Apple Watch Base Chiteshi
Uye ndizvozvo semazuva ese muNomad, iro bhokisi rinowedzera zvese zvaunoda kushanda pasina kudikanwa kwemamwe tambo kana zvakafanana, ingo bvisa iyo uye uwane nzvimbo yekuiwana. Izvi zvinonyanya kukosha mune zvekushandisa kubhadharisa michina nekuti nenzira iyi tinodzivirira matambudziko ekushandisa kana kunyangwe kushandisa zvisirizvo.
Mubhokisi reizvi Nomad Base Chiteshi Apple Tarisa, isu tinowana maadapter maviri emapulagi e nyika dzakasiyana, mamwe mapedhi ekugadzirisa imwe neimwe yeiyo Apple Watch matanho anowanikwa pamusika. Iyo zvakare zvine musoro inowedzera iyo yekuchaja adapta yeApple Watch iyo yakanyatsobatanidzwa muchitsiko uye mudhuri shanduri ine chakaburitswa che12V = 4000mA kuti ikwanise kubhadharisa mhando dzese dzemidziyo uye kutora mukana weashure USB C uye USB A zviteshi .
Nomad Yekuchaja Base Dhizaini
Sezvo mune mamwe ese maNomad mabhesheni, isu hatigone kuona chero chinhu chisiri chemhando yepamusoro, kubva kuzvinhu zvinoshandiswa pachigadziko kusiya iPhone yedu ichichaja, kune tambo iyo pachayo iyo inouya yakanangana zvakananga neiyo yazvino transformer kuti ipe base. Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa uye dhizaini yeyiyi base ndizvo izvo zvinoratidza chiratidzo uye isu tinogona kusimbisa kuti ndezvavo mhando yepamusoro kwazvo.
Iyo base ine dhizaini yakaenzana neiyo yapfuura, uye iko kuri kusimudzira muchikamu chemutoro. Izvi zvinowedzera adapta inosanganisirwa yekuchaja yeApple Watch senge imwe asi zvakare inoshandisa iwo maviri madoko kumashure kuti akwanise kuchaja chero chishandiso pasina kushandisa iyo Qi base. Aluminium yakasviba, dehwe pachigadziko chatichasiya iPhone yedu kana maAirPod uye dhizaini inofarirwa nemunhu wese.
Kumashure, hwaro uhu hunowedzera, sezvauri kuona mumufananidzo pazasi, mwenje wechiedza unoita kuti majaha ekuchaja atinawo kumberi uye ashandiswe patinenge tichichaja, nemwenje mudiki vanodzima uye vanokanganisa zvishoma sezvinobvira . Izvi zvinoitirwa kune avo vanozoshandisa base patafura yemubhedha uye havadi mwenje we LED kuvakanganisa. Zvimwe mhando yemhando weNomad.
Kushanda kwezuva nezuva
Rudzi urwu rweNomad mabhesi (ese ari maviri anowedzera iyo 18W USB C uye iyo yapfuura modhi) inopa chimwe chinhu icho mamwe mabheji akafanana asingakwanise kupa uye ndizvo chaizvo zvimwe zvinopedzisa zvinogona kusainwa na Apple pachayo.
Ichokwadi kuti kambani iyi ine akati wandei mamodheru ekuchaja michina yedu uye kuti zvinoita sezviri nyore kuita mhando iyi yekuchaja zvishongedzo, asi izvo zvinoshandiswa uye dhizaini yezvigadzirwa zveNomad zvinomira kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvakafanana uye kunyangwe isu tine zvimwe uye zvakawanda zvinopihwa. zverudzi urwu rwekuchaja zvishongedzo, Nomad anoramba achinatsa pamusoro pezvakawanda.
Kuuya kumba, hofisi kana zvakafanana uye kusiya iyo iPhone, Apple Watch uye AirPods kubhadharisa mune iyi mhando mabhesheni anotipa kuwedzera kwekunyaradza pamberi petambo. Kugona kubhadharisa akati wandei michina panguva imwe chete chinhu icho kana uchinge wajaira, zvino zvinonetsa kuti uzvibvise, zvakare kana vakupa chengetedzo mukuchaja senge yakapihwa naNomad yausingade. kuwedzera chero chimwe chinhu chayo, zvirinani.
Izvi zviri pachena kuti zvinogara zviri izvo "zvisina kunaka" zvezvinhu zvakawanda zveNomad uye zviri izvo zvine musoro mhando inobhadharwa. Neizvi hatisi kureva kuti mamwe ese maQi ekuchaja mabheseni atinawo pamusika akaipa kana nekuti akadhura haakurudzirwe, zvatiri kureva ndezvekuti Nomad ane mwero wepamusoro maererano nehunhu hwezvinhu uye dhizaini , izvi zvinoita kuti mitengo ive yakati kwirei kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa zvakafanana.
Icho chokwadi ndechekuti iyo yekuchaja base Nomad Base Station Apple Watch ine mutengo we $ 149,95 uye unogona kuitenga yakananga paNomad webhusaiti kana mumapeji emunyika medu saMacnificos.
Hapana chiyero zvakadaro!
USB C Simba
Chiedza chemwenje kumberi kusvika kudzima LED
Zvisinei nehunhu uye dhizaini haina kuchipa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyi ndiyo Nomad Base Chiteshi Apple Tarisa ine 18W kumashure USB C
ivo vakakanganwa nezvemavhudzi emhepo
IWork suite yeMac yakagadziridzwa kuita vhezheni 10.0
Apple ichaenderera nekubhadhara vashandi vekunze kuApple Park kunyangwe isiri kushanda